Gefka Taariikheed Ee Jaamacadda Hargeysi Gashay
Tuesday September 15, 2020 - 10:50:40 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: C/raxmaan C/laahi Warsame
Dhawaan waxaan warbaahinta ku arkay madaxda jaamacadda Hargeysa oo k hadlyay meel xaflad ah oo sheegaysa in Jaamcadda Hargeysa markii ugu horraysay laga furayo kulliyad dhanka saxaafadda ah.
Waxaan u kala saari waayay in Jaamacaddii aan ogaa ay noqotay bilaa keyd taariikheed iyo in qoladan taladeeda hadda gacanta ku haysaa ay yihiin qaar qurbaawiyiin ah oo bari danbe dalka yimid.
Jaamacadda Hargeysa oo la furay sannadkii 2da kun(2000), ahaydna jaamacaddii labaad ee dalka laga furu, dagaalladii dib u xoraynta kadib, Jaamacadda Camuud ayaa la furay 1998, waxa laga furay kulliyadda saxaafadda sannadkii 2004tii, wakhtigaa waxa lagu bilaabay course-yo gaagaaban oo loo bixiyay Certificate in Journalism, wakhtiga ay soconayaanna ahaa 9 bilood.
Kooxdii ugu horraysay ee sagaalkaa bilood dhigataa waxa ku jiray saxafiyiinta waaweyn ee dalka, waxaanay ka qalinjabiyeen bishii 12aad ee sannadkii 2004.
Kooxdii labaad ee sagaalkaa bilood wax ku baratay iyana waxa casharrada toos loogu bilaabay bishii labaad(Feb) ee sannadkii 2005, iyaga oo dhammaystiray bishii tobnaad ee isla sannadkaa.
Nasiib wanaag dhammaadkii 2005, waxay jaamcadda Hargeysi deeq waxbarasho oo heer koowad ee jaamacadda ee degree-ga oo laga soo jiiday dalka maraykanka ka heshay Jaamacad ku taalla dalkaasi oo la yidhaahdo Indiana University of Pennsylvania, waxaanay sidoo kale soo dhex maraysay deeqdaasi Jaamacadda kale ee la yidhaahdo AVU( African virtual university) oo ku taalla dalka kiiniya. hawshaas oo ay fududaysay hay’adda UNDP, waxa ay u saamaxday jaamcadda Hargeysa in markii u horrasay casharradii 9ka bilood ahaa ku darto saddex sano si ay noqdaan waxbarasho dhammaystiran.
Lodkaasaan haddaba anna ka mid ahaa helay nasiibkaa aan hortood jirin cid heshay. Ardayda nasiibkan heshay oo isugu jirtay kuwii sagaalkii bilood ee ugu danbeeyay dhigtay iy kuwo cusub labadaba waxa tiradoodu dhannayd soddomeeyo qof. Waxbarashada waxay ku bixi jirtay habka on-linke ee internetka laga dhigto, macallinka noo dhigi jiray oo toddobaadkii laba habeen khadka soo gali jiray waxa uu ahaa Mukasa oo dhalashadiisu ahayd Zimbabwe, macallinka isna noo fududaynayay ee halkan Hargeysa nala jooogay waxa uu ahaa Xasan Mohamed Jaamac( Xiis) oo hadda ka shaqeeya qaybta xidhiidhka dadweynaha( Public relations) ee shirkadda Dahabshiil.
Saddex sano kadib oo ku beegan sannadkii 2009, ayaanu haddaba ka qalin jabinnay Jaamacaddii Hargeysa qaybtii saxaafadda annaga oo tiradayaduna intii aanay waxba ka dhinmin. Bal haddaba waxa la yidhi beenaale Markhaatigiisuu fogeeyaaye aan idiin taxo liiska ardaydaa wakhtigaa aanu ka wada baxnay jaamacadda iyo mid waliba halka uu ka shaqeeyo wixii Ilaahay nolol ku soo gaadhsiiyay intii aan ka gaadhay, haddii aan qaldo meelaha iyo xilalka saaxiibbaday hayga raalli noqdaan.
1. Aamina Mohamed Rodol…Program manager at Nafis Network
2. Abdalle Mohamed Ahmed…UNDP IT Manager
3. Aden Yuusuf Qodax ……Research and M&E manager, PSI
4. Barkhad Muxumed Cumar ….Wargeyska Saxafi
5. C/laahi Ibrahim Nuur….Waxa uu ku noolyahay Nayroobi
6. C/raxmaan Ahmed Mohamed….Alle ha u naxriistee wuu geeriyooday
7. C/raxmaan Cumar Xuseen ….Alpha university lecturer
8. Cadnaan Cabdi Xasan…..Former SDM consultant for JPLG 2 progam
9. Cadnaan Daahir Muxumed….. Department manager Telesom
10. Cali Cabdi Coomay ….Qoraa, Saxafi, wasaaradda Warfaafinta SL4
11. Cumar Jaamac Faarax …..Director and founder Taakulo Somali community
12. Maamed Cabdi Ilig…. Agaasimaha Horn Cable TV
13. Maxamed Cismaan Ibraahim …Agaasimaha maamulka iyo xisaabaadka ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland.
14. Maxamed Ibrahim Cabdillaahi ….Media section manager at telesom
15. Maxamed Yaasiin Faratoon …Ku nool Malaysia)
16. Mukhtaar Caydaruus Cige …SLNTV(Somaliland National TV)
17. Mukhtar Muxumed Xasan …Area representative for save the children Somaliland.
18. Mustafe Aden Jirde.. Editor and owner of somalilandinformer.com, waxa uu ku noolyahay Qadar
19. Mustafe Aden Muse… Cloud content section manager, Telesom
20. Mustafe Sulub Maxamed…. Shaqaale Wargeyska Dawan
21. Nafiisa Maxamuud Xuseen… Ku-xigeenka wacyigalinta ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyi galinta, SL
22. Rooble Maxamed ….Communication specialist at Civil service commission, Somaliland
23. Sahra Cabdi wahaab Axmed ….Senior producer at Radio Hargeisa
24. Saleebaan Aden Dugsiiye…. Business owner
25. Samsam Axmed Xasan …Program support officer at UNDP
26. Siciid Khadar ….Ethiopian airline Hargeisa office
27. Suhuur yaasiin ….Fundraising and communication manager , Action Aid
28. Xadiis Maxamed Xadiis ….Free lance journalist
29. Xasan Xuseen Cabdi …Shaqaale Wargeyska Dawan